१ महिना अगाडि • ३७५७ पटक पढिएको
गोकुलेश्वर । दार्चुलामा धेरै जसो स्थानीय तहको चुनावी नतिजा आइसकेको छ भने केही स्थानीय तहको मत परिणाम आउन बाँकी रहेको छ।
दार्चुलाका दुईटै ठूला स्थानीय तह शैल्यशिखर नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाको चुनावी नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ।
नतिजा सार्वजनिक भएसंगै उम्मेदवारहरुले पाएको मतको पनि चर्चा भइरहको छ।
दार्चुला जिल्लाभरीमा सर्वाधिक मतका साथ विजयी भएकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट शैल्यशिखर नगरपालिकाका उपमेयरका उम्मेदवार रहेका शान्ती खडायत रहेका छन्। उनले जिल्लाभरीमा पालिका प्रमुखहरुलाई पनि उछिन्दै सबैभन्दा बढी मत हात पारेकि छिन्।
स्थानीय निर्वाचन २०७९मा शैल्यशिखर नगरपालिकाको नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा खसेको जम्मा १०,६८३ मतमध्ये ५,६४८ मतका साथ जिल्लामा सर्वाधिक मत ल्याउने विजयी जनप्रतिनिधि बनेकी छिन्।
को हुन् विजयी उपमेयर खडायत?
शैल्यशिखर-१ बलाँचका शान्ती खडायत उमेरले ४० वर्ष टेक्दै गरेकी छिन्। उनको जन्म दार्चुलाकै साविकको शर्मोली गाविस तथा हालको लेकम गाउँपालिका-१मा भएको हो।
यसरी समय बित्दै जादाँ उनको बिवाह साविकको बलाँच गाविस र हालको शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नं. १ का खडायत परिवारसंग भयो। एउँटै भेग र समुदाय बुझेको परिवारसंग उनको बिवाह भएपछि उनको जीवनमा केही परिवर्तन आयो। सानै उमेरदेखि पढाइमा उत्कृष्ट उनीले सोचेभन्दा राम्रोसाथ आफ्नो श्रीमानबाट पाए।
बिहेपछिको केही समयमा श्रीमानसंगै उनी दार्चुला खलंगामा बस्न थाले। उनीले खंलगास्थित दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसबाट बीएडमा स्नातक उतिर्ण गरिन्। ततपश्चात खलंगाकै बसाईका क्रममा तत्कालिन जिल्लास्थित जिल्ला उर्जा शाखा कार्यालयमा वित्त प्रशासक भएर पनि काम गरिन्।
ततपश्चात उनी दार्चुलाबाट काठमाडौंका लागि गइन्। काठमाडौं जाने उनको एक मात्र कारण थियो दार्चुलाका महिलाहरु विभिन्न कारणले घरेलु र अन्य हिंसा परिरहेका छन् र उनका लागि दार्चुलामा लड्ने कोही महिला अधिवक्ताहरु छैनन्।
उनले काठमाडौंमा ३ वर्ष लगाएर कानुनमा स्नातक गरिन्। काठमाडौंमा कानुनी अनुभवहरु बटुल्दै जाँदा उनको सामु नजिकै अहिलेको स्थानीय तहको चुनाव आइपुग्यो। यसैबीच उनले सोचिन् मेरो लागि मेरो क्षेत्रका महिलाहरु र क्षेत्रको लागि अहिलेसम्म मेरो मेहनत, सिप, क्षमता, अनुभव र काम गरेर देखाउने आफू परिपक्व रहेको महशुस गर्दै यो चुनावलाई सोही काम गर्नका लागि एक माध्यम बनाएर शैल्यशिखर फर्किन् पार्टीले बुझे उपमेयरमा आफ्नो उम्मेदवारी दिने सोचसहित।
यसैगरी आफ्नै गाउँघरमा हुर्केकी र गाउँघर बुझेकी उनी महिला शसक्तिरण र नगरपालिकाको विकासका लागि योजना भएकी अहिलेकी शिक्षित नेतृसमेत हुन्। मिलनसार र सहज स्वभाव भएकी उनी शैल्यशिखर नगरपालिकाको जनताले नेतृत्व गर्ने मौका दिएको र महिला सश्तिकरण, न्यायिक क्षेत्र, वित्तिय क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव रहेको बताउँदै नगरपालिकाको विकासका लागि धेरै योगदान गर्ने बताउछिन्।